नेपालमा कोरोनाबाट थप १ जनाको मृत्यु – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/नेपालमा कोरोनाबाट थप १ जनाको मृत्यु
काठमाडौं २१ जेठ / नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टा भित्र थप २०१ जना कोरोना संक्रमीत भेटिएको स्वस्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जानकारी गराएका छन्, यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित सङ्ख्या २३ सय पुगेको छ । यो साता कोरोना संक्रमित सङ्ख्यामा दैनिक उकालो लागिरहेको छ ।
त्यस्तै हालसम्म कोरोना जितेर २७८ जना घर फर्किएका छन् भने ९ जनाले ज्यान गुमाइसकेको छ । सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि मुलुकलाई लकडाउन गरेको ७२ अौं दिनसम्म आइपुग्दा कोरोना संक्रमित सङ्ख्या झनझन बढ्दै गइरहेको छ ।
अबदेखि लक्षण नदेखिएका कोरोना संक्रमितलाई अस्पतालमा नलाने पनि स्वस्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले जानकारी दिनुभएको छ । यसअघिका संक्रमितहरुलाई अस्पतालमै लगेर उपचार र हेरचाह गरिन्थ्यो भने अबचाहि सरकारले क्वारेन्टाइन भन्दा माथिल्लो तहको आइसोलेसन कक्ष बनाएर लक्षण नदेखिएका संक्रमितलाई राख्ने तयारी गरेको छ । गम्भीर समस्या देखिएका संक्रमितहरुले उपचार नपाउन सक्ने अवस्था आउनसक्छ भन्दै यसो गर्न लागेको मन्त्री ढकालको भनाइ छ ।
त्यस्तै लकडाउन मोडालिटीबारे छलफल र सल्लाह सुझाव लिन आज प्रधानमन्त्रीले विज्ञहरुलाई बैठक बोलाउनु भएको छ । लगातार लकडाउन थपेर समस्या समाधान नहुने भन्दै प्रतिक्रिया आउन थालेपछि लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ ।
भाेजराज जाेशि ,कैलाली – ईलाका प्रहरी कार्यालय फल्टुडे कैलालीले आफ्नै जेठी छोरी ब’ला’त्कार गरेको आ’रो’पमा बुबालाई प’क्राउ गरेको छ । कैलालीको चुरे गाउँ पालिका वडा न. ५ भासु बजारमा बस्दै आएको बर्ष ४५ को गणेश औजीलाई गए राती २०७७-०२-२० गते साढे १० बजे तिर सहजपुरको जंगलबाट भागिरहेको अबस्थामा प’क्रा’उ गरेको हो ।
निजको बारेमा गत जेठ १७ गते राती प्रहरीमा उजुरी परेपछि उनि घरबाट भागि फरार रहेका थिए । ३ रात ३ दिनको प्रहरीको अथक खोजीले तेस्रो दिन सहजपुर जंगलबाट भागिरहेको अवस्थामा बिश्वकर्माको टोलीले घेराहाली प’क्रा’उ गरिएको हो । पिडितका अनुसार गणेशले भासु जंगलमा रुखमा हात खुट्टा बाँधेर र घरमै समेत ब’लात्का’र गरेको आ’रोप छ ।
काठमाडौँ – केही दिनअघि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका पाकिस्तानको सिन्ध राज्यका मानव व्यवस्थापनसम्बन्धी मन्त्री गुलाम मुतुर्जा बलोचको कोरोना संक्रमणका कारण मृ-त्यु भएको छ ।
उनी घरमै आइसोलेसनमा बसेका थिए । घरमा स्वास्थ्यअवस्था जटिल बन्दै गएपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो ।
अस्पतालमा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गराइरहेका उनको उपचारका क्रममा मंगलबार मृ-त्यु भएको बीबीसीले जनाएको छ ।source danphkkhabar.com
तुलसीपुर , जेठ २० । बाँकेको अगैया नजिकै भएको सवारी दुर्घटनामा दाङका एकै घरका तीन जनाको मृत्यु भएको छ । शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नं. ३ पातेटाकुरा निवासी ३२ बर्षीय पूर्णबहादुर पुन, उनकी २७ बर्षीया पत्नि सीता पुन र उनीहरुका १० बर्षका एक्ला छोरा हिमान्सु पुनको मृत्यु भएको छ । शान्तिनगर ३ का वडाध्यक्ष बुद्धिराम तिवारीले पुनको बंश नै नाश हुने गरि भएको दुःखद घटनाले गाउँ शोकमा डुवेको बताए ।
रोजगारीको खोजीको लागि डेढवर्ष अगाडि सपरिवार उनीहरुका चण्डीगढ गएका थिए । विश्वव्यापी रुपमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको त्रासदीका कारण उनीहरु आइतवार राति नेपालगन्ज हुँदै दाङस्थित घर फर्किन लागेका थिए । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तरगत राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नं. २ ठुरिया जंगलमा ना ५ ख ५९९५ नम्बरको फोर्स गाडी रोकिराखेको बा ४ ख ९०६४ नम्बरको ट्रकमा ठोक्किँदा चालक सहचालकसहित १२ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
४ वर्ष पहिले मृ’त्यु भएकी छोरीले अचानक फर्किएर आमा भनेपछि…